बाँदर खेद्न लङ्गुरदेखि गाई–कुकुरको व्यवस्थापनसम्मः आगरामा डोनल्ड ट्रम्पको सुरक्षाका लागि के के गरियो ? | बाँदर खेद्न लङ्गुरदेखि गाई–कुकुरको व्यवस्थापनसम्मः आगरामा डोनल्ड ट्रम्पको सुरक्षाका लागि के के गरियो ? – हिपमत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प आगरामा दुई घण्टा मात्रै बसेपनि उनको आगमनको तयारीमा पूरा शहर पछिल्लो थुप्रै दिनदेखि दिनरात जुटिरहेको छ ।
जहाँबाट ट्रम्प यात्रा गर्छन्, ती सबै बाटोहरु धोइ पखाली गरेर चम्काइएको छ । सुरक्षाको उच्च स्तरीय प्रबन्धका लागि मुख्यमन्त्रीदेखि अधिकारीसम्म दौडधुपमा छन् ।
डोनल्ड ट्रम्प र उनकी श्रीमती मेलानिया ट्रम्प फेब्रुअरी २४ को बेलुकी करिब साढे चार बजे आगरा पुग्नेछन् र ताजमहल हेर्नेछन् ।
ताजमहल परिसरको चारैतिर सुरक्षाको व्यापक घेरा छ जसमा स्थानीय पुलिसदेखि अर्धसैनिक बलका जवान र एनएसजीका कमान्डो पनि तैनाथ गरिएका छन् ।
आमन्त्रित व्यक्तिले मात्रै ट्रम्प र उनको परिवारलाई बाटोमा स्वागत गर्नेछन् ।
आमन्त्रित व्यक्तिको पुष्टि गरिसकेपछि मात्रै उनीहरुलाई स्वागत गर्ने मौका दिइनेछ ।
यतिमात्रै होइन, ट्रम्प जुन बाटो हुँदै यात्रा गर्नेछन् त्यहाँ करिब १६ हजार गमला राखिएका छन् ।
आगरा नगर निगम र आवास विकासले बाटोघाटोको भित्तामा रङ्गरोगन गरेका छन् ।
निर्माणाधीन भवन र सडक किनाराको फोहोर ढाक्नका लागि ‘नमस्ते ट्रम्प’ लेखिएको ठूला होर्डिङ बोर्ड लगाइएका छन् ।
ताज महलको आसपास मात्रै होइन ट्रम्पको रुटमा र आगरा शहरमा सुरक्षाको कडा प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
अत्यधिक पुलिस सादा पोसाकमा पनि विभिन्न स्थानमा तैनाथ हुने र मानिसहरुमाथि निगरानी गर्नेछन् ।
भिआइपी रोड र ताजमहलतर्फ आवतजावत गर्ने अन्य सडकको किनारामा ब्यारिकेडिङ्ग गरिएको छ ता कि कोही पनि सडकमा आउन नसकून् ।
शहरको पोस इलाका मल रोडमा आइतबार अबेर रातीसम्म सडक धोइएको थियो ।
चौबाटोमा भारत र अमेरिकाका झण्डा लगाइएका थिए र हरेक चौबाटोमा एक दुई दर्जन पुलिसकर्मी तैनाथ थिए ।
त्यसबाहेक केही मिटर परको दुरीमा नियमित अन्तरालमा पुलिसकर्मी ड्युटी गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
सुरक्षाको प्रबन्ध मानवीय आशंकालाई ध्यानमा राखेर मात्रै नभई जनावरको हमलालाई पनि ध्यानमा राखेर गरिएको छ ।
ताजमहल र त्यस आसपास बाँदरले पर्यटकमाथि हमला गरिरहन्छन् ।
बाँदर खेद्नका लागि आगरामा लङ्गुर तैनाथ गरिएको छ । पुलिस प्रशासनले यसका लागि वन विभागका अधिकारीको मद्दत मागेको छ ।
लङ्गुर कहाँ तैनाथ गरिएको छ र उनीहरुले कसरी काम गर्नेछन् भन्नेबारे कुनै पनि अधिकारीले जानकारी दिएका छैनन् ।
ताजमहल वरिपरि गाइ र कुकुर पनि प्रतिबन्धित छन् । उनीहरुलाई पनि त्यहाँबाट हटाउन प्रशासनका लागि चुनौती छ तर अहिले यसको समाधान निस्किएको छ ।
एक अधिकारीले निकै आनन्दको सास फेर्दै भने, ‘आइतबार त यहाँ न त त कुनै गाइभैंसी आए न नै कुकुर ।’
करिब एक हप्ताअघि यमुना नदीमा धेरै पानी देखियोस् , पानी सफा होस् र दुर्गन्ध हटोस् भनेर विभिन्न स्थानबाट गंगासमेत अन्य नदीको पानी छोडिएको थियो ।
ताजमहलको पूर्वी गेटबाट यमुना नदी तर्फ सर–सफाईको विशेष ध्यान दिइयो तर त्यहाँबाट दुर्गन्ध आइरहेको छैन, यस्तो दाबी गर्नु बेइमानी हुनेछ ।
समीरात्मज मिश्र /बीबीसी हिन्दी । एजेन्सी ।
सोमबार, फाल्गुण १२, २०७६मा प्रकाशित गरिएको